दिपिका र प्रियंकालाई पछि पार्दै एसियाकै से’क्सी महिला बनिन् आलिया भट्ट ! – Khabar Silo
दिपिका र प्रियंकालाई पछि पार्दै एसियाकै से’क्सी महिला बनिन् आलिया भट्ट !
Posted on February 6, 2020 Author admin Comment(0)
एजेन्सी, २३ माघ । बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट एसियाकै से’क्सी महिलाको सुचिको पहिलो नम्बरमा पर्न सफल भएकी छन् । त्यस्तै अर्की हट नायिका दिपिका पादुकोण दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएकी छन् ।
बुधवार लण्डनको साप्ताहिक अखबार ‘ईस्टर्न आई’ले यि दुई नायिका छानेको हो । साप्ताहिक अखबार ‘ईस्टर्न आई’ ले आलियालाई २०१९ सबै भन्दा राम्रो भएको बताएको छ ।
आलियाले आफु यो स्थानमा परे पछि खुशी व्यक्त गरेकी छन् । २०१८मा पहिलो स्थानमा रहेका दिपिका यो पटक दोस्रो स्थानमा पर्न सफल भएकी छन् ।
त्यस्तै तस्रो स्थानमा टिभी कलाकार हिना खान परेकी छन् भने चौथोमा माहिरा खान परेकी छन् । त्यस्तै क्रमश सुरभी चंदना, कट्रिना कैफ, शिवागी जोशी, निया शमर् मेहबश हयात, प्रियंका चोपडा कमश दश स्थान भित्र पर्न सफल भएका छन् ।
नायिका केकी अधिकारी राम्रो अभिनय गर्ने कलाकारको रुपमा चिनिन्छिन् । केकीलाई विशेषगरि, अनुहारको हाउभाउ उत्कृष्ट रुपमा पर्दामा देखाउन सक्ने नायिकाको रुपमा चिनिन्छ । केकी अधिकारीले ‘स्वर’ चलचित्रबाट यो क्षेत्रमा पाइला राखेकी हुन् । तर, केकीलाई बक्स अफिस सफलता भने अहिलेसम्म मिलेको छैन ।तर, पनि केकीको हातमा चलचित्रको अभाव भने छैन । उनले, एकपछि अर्को चलचित्रमा […]
Posted on August 21, 2021 Author khabar silo
बलिउडमा धेरै अनस्क्रिन जोडीहरू देखिन्छन्। बलिउडमा धेरै अभिनेत्रीहरू छन् जो धेरै सुन्दर छिन्। धेरै अभिनेत्रीहरूले आफ्नो समयका अभिनेताहरुको जोडी बनेर दर्शकको मन र दिमागमा बसेका छन् । साथै, ती अभिनेतमहरूको छोराहरूको अनस्क्रिन जोडी पनि बने । त्यस्ता अभिनेत्रीहरूको जसले वास्तविक जीवनका बुबा-छोरासँग अनस्क्रीन प्रेम गरेका छन्। डिम्पल कपाडिया: अभिनेत्री डिम्पल कपाडिया विनोद खन्ना र उनको […]
‘नेपाल आइडल सिजन-३’ को आजको ताजा एपिसोडमा किन रोए जज न्यु बज्राचार्य (पुरा भिडियो)